Itupeva Casa de Campo-Inomtsalane kwaye yamkelekile - I-Airbnb
Itupeva Casa de Campo-Inomtsalane kwaye yamkelekile
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguGianfranco
Indlu ipholile kakhulu. Abantu bathi ikhangeleka ngathi yindlu kanodoli... Ikwindlu evaliweyo enokhuseleko olupheleleyo, ijongwa ziikhamera.TV, amagumbi okuhlala kunye nokutyela. Ikhitshi elikhulu nelipheleleyo, i-pantry kunye nempahla. Amagumbi amakhulu anabalandeli, i-suite enkulu ene-balcony kunye ne-closet.Idama lokuqubha elinobushushu belanga, indawo enengca ngasemva. I-Condominium enezitrato ezithe cwaka, ezinemithi yokuhamba kakuhle.
Le ndlu ayinamacala nabamelwane abangasemva, nto leyo eyenza ukuba ibe yodwa ngokuzola.Ilanga likhanya imini yonke ngenxa yendawo yalo eyenza ukuba ukuhlala kwakho kube mnandi kakhulu.Ilungele iintsapho kunye nezibini. Asiwamkeli amaqela abantu abatsha, amatheko omhla wokuzalwa kunye nemisitho. Imarike elula ecaleni kwe-condo.
Lo mmandla uhlala ngokungqongqo kunye neekhondomu ezininzi, kwindawo yobude obuphakathi. Imarike elula ecaleni kwekhondom kunye neziko malunga neekhilomitha ezi-5 kude kunye neendlela ezininzi zokukhetha iindawo zokutyela, iibhaka, iimarike, iibhanki, iikhemesti njalo njalo.Ukuqhubeka ecaleni kwendlela kunye nokuzola kakhulu ukuya emantla kwaye malunga neekhilomitha ezingama-20, sinesixeko sase-Indaiatuba esinokhetho oluninzi lokuzonwabisa.
Umbuki zindwendwe ngu- Gianfranco
Abafowunelwa be-imeyile, imiyalezo ku-Airbnb nakuWhatsapp.
Iilwimi: English, Italiano, Português, Español
Ixesha lokubhalisa xa ufika: 11:00 - 18:00